Machengeterwo eSabata (1-3)
Zvipo zvekugadzirisa tebhenekeri (4-29)
Bhezareri naOhoriyabhi vanozadzwa nemweya waMwari (30-35)
35 Mozisi akazounganidza ungano yese yevaIsraeri, akati kwavari: “Izvi ndizvo zvakarayirwa naJehovha kuti zviitwe:+ 2 Basa rinogona kuitwa kwemazuva matanhatu, asi zuva rechinomwe richava dzvene kwamuri, sabata rezororo rakakwana kuna Jehovha.+ Munhu wese anoita basa pazuva iroro achaurayiwa.+ 3 Musabatidza moto munzvimbo dzenyu dzamunogara pazuva reSabata.” 4 Mozisi akabva ati kuungano yese yevaIsraeri: “Izvi ndizvo zvakarayirwa naJehovha, 5 ‘Unganidzai zvipo zvekupa Jehovha pakati penyu.+ Munhu wese anoda kupa zvinobva pamwoyo+ ngaauye nezvipo kuna Jehovha: goridhe, sirivha, mhangura, 6 shinda yebhuruu, shinda yepepuru,* shinda tsvuku, shinda chena yakanaka, mvere dzembudzi,+ 7 matehwe emakondohwe akaiswa ruvara rutsvuku, matehwe akapfava,* matanda emubayamhondoro, 8 mafuta emarambi, bharisamu yekugadzirisa mafuta ekuzodza nawo neyekugadzirisa rusenzi inonhuhwirira,+ 9 matombo eonikisi, nemamwe matombo ekuisa paefodhi+ nepahomwe yepachipfuva.+ 10 “‘Vese vane unyanzvi*+ vari pakati penyu ngavauye vagadzire zvese zvakarayirwa naJehovha, 11 zvinoti, tebhenekeri pamwe netende rayo nechekufukidzisa chayo, zvekukochekera nazvo zvayo nemafuremu emapuranga ayo, mbariro dzayo, mbiru dzayo, nezvigadziko zvayo zvine maburi; 12 Areka+ nemapango ayo,+ chekukwidibirisa,+ neketeni+ rekuvharisa; 13 tafura+ nemapango ayo nemidziyo yayo yese nechingwa chekuratidza;+ 14 chigadziko chemarambi+ ekuvhenekesa nemidziyo yacho nemarambi acho nemafuta acho;+ 15 atari yerusenzi+ nemapango ayo; mafuta ekuzodza nawo nerusenzi inonhuhwirira;+ keteni rekuvharisa pasuo retebhenekeri; 16 atari yekupisira zvibayiro+ nesefa yayo yemhangura, mapango ayo nemidziyo yayo yese; mudziyo wekuisira mvura yekugeza nepekuugadzika pacho;+ 17 maketeni anorembera echivanze,+ mbiru dzawo nezvigadziko zvadzo zvine maburi; keteni rekuvharisa pasuo rechivanze; 18 hoko dzetende retebhenekeri nehoko dzetende dzechivanze netambo dzadzo;+ 19 nguo dzakarukwa+ zvakanaka dzekushumira nadzo munzvimbo tsvene, nguo tsvene dzemupristi Aroni,+ nenguo dzevanakomana vake dzekuti vashumire sevapristi.’” 20 Saka ungano yese yevaIsraeri yakabva pamberi paMozisi. 21 Munhu wese ainzwa mwoyo wake uchida+ uye aiva nechido chekupa akabva aunza zvipo kuna Jehovha kuti zvishandiswe patende rekusanganira, pabasa rese raiitwa ipapo, uye panguo tsvene. 22 Vakaramba vachiuya, varume pamwe chete nevakadzi, mumwe nemumwe aiva nechido chekupa, achiunza zvishongo zvaibayirirwa pazvipfeko, mhete, marin’i, nezvimwewo zvishongo, pamwe nezvinhu zvakagadzirwa negoridhe zvemarudzi ese. Vese vakapa mipiro* yavo yegoridhe kuna Jehovha.+ 23 Uye vese vaiva neshinda yebhuruu, shinda yepepuru, shinda tsvuku, shinda chena yakanaka, mvere dzembudzi, matehwe emakondohwe akaiswa ruvara rutsvuku, nematehwe akapfava, vakauya nazvo. 24 Vese vaipa sirivha nemhangura vakauya nezvipo kuna Jehovha, uye vese vaiva nematanda emubayamhondoro ekushandisa pabasa racho vakauya nawo. 25 Vakadzi vese vaiva neunyanzvi+ hwekukosa shinda, vakadzikosa vakauya nadzo: shinda yebhuruu, shinda yepepuru, shinda tsvuku, neshinda chena yakanaka. 26 Uye vakadzi vese vaiva neunyanzvi hwekukosa uye vainzwa mwoyo yavo ichida vakakosa mvere dzembudzi. 27 Uye machinda akauya nematombo eonikisi nemamwe matombo ekuisa paefodhi nepahomwe yepachipfuva,+ 28 nebharisamu nemafuta ekuisa mumarambi, zvekugadzirisa mafuta ekuzodza nawo+ uye rusenzi inonhuhwirira.+ 29 Varume nevakadzi vese vaiva nechido chekupa vakauya nechimwe chinhu kuti chishandiswe pabasa rakanga raudzwa Mozisi naJehovha kuti riitwe; vaIsraeri vakapa vachizvidira kuna Jehovha.+ 30 Mozisi akabva ati kuvaIsraeri: “Onai, Jehovha akasarudza Bhezareri mwanakomana waUrai, mwanakomana waHeri, wedzinza raJudha.+ 31 Akamuzadza nemweya waMwari kuti ave neuchenjeri, nekunzwisisa, neruzivo rwemabasa eumhizha emarudzi ese 32 hwekufunga magadzirirwo ezvinhu neunyanzvi, kushanda negoridhe, sirivha, nemhangura, 33 kuveza matombo nekuaronga, uye kuveza matanda kuti aite zvivezwa zvakanaka zvemarudzi ese. 34 Uye aisa mumwoyo make nemaOhoriyabhi+ mwanakomana waAhisamaki wedzinza raDhani unyanzvi hwekudzidzisa vamwe. 35 Avazadza neunyanzvi*+ hwekuita mabasa ese eumhizha, ekumenda neekuruka, vachishandisa shinda yebhuruu, shinda yepepuru, shinda tsvuku, uye shinda chena yakanaka, uye unyanzvi hwekugadzira machira acho. Varume ava vachaita mabasa emarudzi ese uye vachagadzira zvinhu zvakasiyana-siyana.
^ Kana kuti “mipiro inovheyeswa.”
^ ChiHeb., “uchenjeri hwemwoyo.”